SP-G09 SOICARE 200ml ceramic bamboo Aromatherapy Essential Oiri Diffuser, China SP-G09 SOICARE 200ml ceramic bamboo Aromatherapy Yakakosha Oiri Diffuser Vagadziri, Vatengesi, Fekitori - Sunpai Industries Limited
Nguva Yokutora: 20-45 mazuva anoenderana nehuwandu
SOICARE 200ml ceramic bamboo Aromatherapy Yakakosha Oiri Diffuser
1.KUWEDZESA KUSIMBISA WEMAHARA UPENYU: Kunze kwekushandisa kwayo mune aromatherapy, ino yakakosha mafuta diffuser inoshandawo seye humidifier. Iishandise kunatsiridza mweya wepamhepo uye mamiriro emuchadenga, kukuchengetedza iwe mhuri kubva kune yakanyanyisa kuoma mweya, tupukanana, allergener, guruva, uye zvimwe!
2.YEMAHARA YEMAHARA: Iyo diffuser inouya ne 200ml mvura dura iro rinokutendera kuti unakirwe nekunhuhwirira pasina murazvo wakavhurika mu2 MIST modes: Inoenderera Mode inopa maawa gumi eakanyanya aromatherapy, Inopindirana Mode ((10 sec ON, 30 sec OFF) ) inopa inogara kwemaawa makumi maviri nekunhuhwirira kwakanyanya.
3.Quiet Kuvhiya Kuzevezera-kunyarara kushanda hakuzokanganisa mhando yekurara.
4.Safe & Auto-off: Iyi inonhuhwirira inopararira yemafuta akakosha inogona kugara kwemaawa mashanu kusvika gumi. Iyi yakakosha mafuta diffuser inodzima otomatiki mushure mekunge mvura yapera kuitira kuchengetedzeka kwako uye kuchengetedzwa kwekunhuhwirira kwekuparadzira futi.
zvinhu Bamboo Fiber + Wood ++ PP
chiedza Yakasviba Yero
Mistu Vhoriyamu 15-20ml / h
Nguva Yokupedzisira 5-10hours
Saizi yeyuniti Φ135 * 110mm
Unit uremu 580g
Ruvara rwebhokisi saizi 156 * 156 * 143mm
Ukuru hweCarton 33 * 49 * 31CM
SP-USB09 yemakwikwi isina mvura mafuta diffuser